Esikhathini eMoscow ongaphansi komhlaba esiteshini lapho, ukubukeka ezakhiwo okuyinto samuntu ebonakalayo kuyiphi inkathi zazakhiwe. Izimo zethu zihluke kakhulu emangalisayo kule inhlonipho metro station "Frunzenskaya". Uma kungenjalo ngokushesha, ungavakashela lezi iziteshi njengoba uhlobo Museum yezakhiwo.
Kusukela umlando YaseMoscow ukwakhiwa ongaphansi komhlaba
Station "Frunzenskaya" Sokolniki umugqa we-Moscow Metro uthethe abagibeli zayo zokuqala ngo-1957. Ngokwenkolelo ekhona wokuvula awo kuphelelwe Suku amaholide. "Frunzenskaya" wangena ukusebenza njengengxenye esigabeni kokuqala phakathi iziteshi "Isiko Park" futhi: "Temidlalo". Sokolnicheskaya umugqa ku zamashumi amahlanu ayenziwa ohlangothini eningizimu-ntshonalanga. Lokhu kwabangelwa nesidingo sokuqinisekisa okunokwethenjelwa ezokuthutha nezokuxhumana izindawo asebenzayo Ezezindlu maphakathi nenhloko-dolobha. Igama kamasipala walo esiteshini "Frunzenskaya" kwaba behlonipha ebuthweni lempi laseSoviet futhi sikahulumeni. Kodwa igama lephrojekthi ye esiteshini kwaba "Khamovniki".
Kodwa yashayisa unqenqema we UMfula iMoscow, futhi ezitaladini ezinsukwini ubudala kwakubizwa ngokuthi "Khamovniki". Lona omunye kakhulu lasendulo amagama endaweni ejwayelekile eMoscow. Ngo zomlando ke njalo okukhulunywe ngekhulu leshumi nesithupha. Nakuba kwaba nedlelo zokusebenza kwekilasi, oveza omhlophe, noma "hamovnoe" ngendwangu. Futhi wahlala Abeluki Khamovniki abahlanganyela kulo msebenzi. Kodwa eMoscow wakudala egameni isikhathi wanyamalala ngokuphelele kusukela ibalazwe dolobha, ngemuva kokuthi immortalized by igama ovelele wezwe elaliyiSoviet Union Umkhuzi Inkathi Yombango M. V Frunze. Lokho esiteshini Yakhiwa kule ndawo yenhloko-dolobha "Frunzenskaya". Ngalesi sikhathi Khamovniki zishintshile eziningi. Kusukela odlule yokusebenza margin endaweni isibe engokwemvelo ehlonishwa kakhulu iqembu Soviet, ezempi kanye ngesilwane esifuywayo lobuchwepheshe. Futhi kwaba ngokuvumelana esiteshini wavula lapha. Frunze lesifunda ezahlukene ubunye yesitayela kanye metro station yokwamukela izivakashi kungaqali.
Indawo yokungena esiteshini inikeza eyodwa Ground ihholo. Ngo-1984 kwathiwa kuyilungisa kancane ezakhelwe isakhiwo YaseMoscow Isigodlo Youth. Underground "Frunzenskaya 'ngomqondo ezakhayo limelela pylon esiteshini trohsvodchatuyu izisekelo ezijulile. Ukuze a ka 42 amamitha ukujula, ehholo emaphakathi kukhona escalators ezintathu. I evelele isitayela yezakhiwo kuyinto classicism. Ngu isixazululo yayo Ukwakheka ingenye ekhululekile kakhulu iziteshi (kusukela eyakhelwe kwezikhathi zokulotshwa impi). Abakhi akazange ashintshe umqondo isitayela. It is hhayi ugcwale imihlobiso ezingadingekile ejwayelekile ezinye iziteshi esifanayo. Esikhathini design zokuhlobisa wezangaphakathi ubuswa egwadle ezimhlophe futhi zibomvu. uyazikhulumela ukubukeka zethusi izakhi okuhlobisa. Ekupheleni ehholo kukhona ngokudayisa umsebenzi Frunze Vucetic.
In the umongo yamasiko umlando
I metro station "Frunzenskaya" emangalisayo iqiniso lokuthi uhlobo beqeda lonke inkathi yezakhiwo. Yena waba nenhlanhla ngomqondo wokuthi yayakhiwe ngokuhambisana iphrojekthi kombhali kanye abakutholanga ngaphansi isinqumo owaziwa beqembu futhi uhulumeni nokucindezela extravagances yezakhiwo. Lo mbhalo yayihloselwe ukonga imali futhi bavunyelwe ukwakha ongaphansi komhlaba imigqa ngokushesha. Kodwa esiteshini, eye wakwazi ukuthola ngaphansi kwaso, kalula yi-onokuqundeka, kungamboza ububi kanye functionalism elingenalutho. Iningi labo ezitimeleni eMoscow, ikakhulukazi Filevskaya umugqa ku Izmailovo wesifunda. Ubuze besimo a nomqondo onjalo lagcwaliseka ngokushesha, kodwa imiphumela sakhungathekiswa kuphela ngeminyaka yoma ngasekupheleni. Kodwa ngisho nangemva kwalo jantshi eMoscow yaqedwa yezakhiwo inkathi yokujama tsi ophoqelelwe, futhi iziteshi ezintsha ubuso bakhe baqala ukukha sehluke ngempela. "Frunzenskaya" nezinye iziteshi kwalesi sikhathi abhekwa zabuna.
Metro "Frunze", eMoscow
Phakathi izinto, territorially exhumene metro station, okokuqala kufanele kuphawulwe YaseMoscow Isigodlo Youth. Ngaphandle kwakhe, kukhona amahhotela eminingi, izindawo zokudla, izakhiwo zokuphatha kanye nezohwebo. endaweni Frunze Embankment ngokwesiko iyindawo yentuthuko okunethezeka izindlu. Architectural ngomfanekiso wakhe kwamiswa kwaba ngemva kwezikhathi zokulotshwa impi ngezindlela eziningi. Izinhlaka ingcebo kakhulu kakhulu owalinganisile endaweni eseduze metro station "Frunzenskaya", kanye nezindlu, okuyinto etholakala lapha. Ezindlini e Frunze Embankment ziphoqa uqinile, naphezu amanani aphezulu. Kuyinto kuqhathaniswa ethule futhi ukuphila okunethezekile e nesifunda eMoscow. Isiteshi "Frunzenskaya" nsukuzonke kuthatha ukugeleza elincani abagibeli. Akukho ngqo, ngisho nasesikhathini esikude esizayo is kuhlelwe ukwakhiwa imigqa emisha.
Abantu abajwayele ukuvakasha kuyona Tenerife El Medano - ekahle kakhulu windsurfers
Tablets "Tsestal" ngoba amakati - lokuthola usizo oluyilo ezinkantolo esihle ngokumelene izimpethu
Ushaka inkunzi: incazelo, indlela yokuphila, umsoco